News - ပရိဘောဂအတွက်ဘယ်အထည်အမျိုးအစားကိုသုံးသလဲ။
ကွဲပြားခြားနားသောပိတ်ထည်အရ၊ ကူရှင်ချုပ်ထားသောပရိဘောဂများကိုသားရေ၊ အတုသားရေ၊ ထည်စသည်ဖြင့်ခွဲခြားနိုင်သည်။ သားရေကူရှင်ချုပ်ထားသောပရိဘောဂများ၏သားရေသည်သားရေ၊ အတုသားရေဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောပရိဘောဂများ၏သားရေသည်သားရေ၊ , လျှော်, ဝါဂွမ်း, ဓာတုဖိုင်ဘာနှင့်အခြားအထည်။ မတူညီသောပျော့ပျောင်းသောပရိဘောဂများ၏အရိုးစုများအရ၎င်းကိုသစ်သားအရိုးစု၊ သတ္တုအရိုးနှင့်အရိုးစုမပါသောပျော့ပျောင်းသောပရိဘောဂများအဖြစ်ခွဲခြားနိုင်သည်။ သစ်သားဘောင်သည်ပျော့ပျောင်းသောပရိဘောဂတစ်ခုဖြစ်ပြီးပျော့ပျောင်းသောပရိဘောဂတစ်ခုဖြစ်သည်။ သတ္တုအရိုးစုပျော့ပျောင်းသောပရိဘောဂများသည်အရိုးစုဖြစ်သောသတ္တုပစ္စည်းများ၊ သတ္တုနှင့်သစ်သားများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောပျော့ပျောင်းသောပရိဘောဂများဖြစ်သည်။ အရိုးပစ္စည်ဆိုင်ရာပရိဘောဂများမရှိပါ။
၁။ ချည်ဆိုဖာ - ပတ် ၀ န်းကျင်နှင့်သက်သောင့်သက်သာရှိသော
ချည်မျှင်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောထည်ဆိုဖာသည်ပျော့ပျောင်း။ အသက်ရှူလွယ်သော၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်သဘာ ၀ ပတ် ၀ န်းကျင်ကိုထိခိုက်စေသည်။ ဒါဟာအရေပြားနှင့်အလွန်နီးကပ်သည်။ ၎င်းသည်ဈေးကွက်တွင်လူကြိုက်အများဆုံးအမျိုးအစားဖြစ်သည်။ Idyllic စတိုင်ကိုဝါဂွမ်းစင်ပေါ်တွင်အများဆုံးအသုံးပြုသည်။
2. Flannelette ဆိုဖာ: နူးညံ့ပျော့ပျောင်းသော
တိရိစ္ဆာန်လေးများ၏သားမွေးကဲ့သို့ပင် flannel ဆိုဖာနှင့် ပတ်သက်၍ အထင်ရှားဆုံးအရာမှာ၎င်း၏နူးညံ့သိမ်မွေ့သောထိတွေ့မှုဖြစ်သည်။ အရင်တုန်းက Corduroy ကနေအခုအချိန်မှာတရားစွဲလိုက်တဲ့အထိ flannelette ဆိုဖာကသူ့ရဲ့အခြေအနေကို gaudy နဲ့ကြော့ရှင်းစွာပြောင်းလဲနေပါတယ်။ အခြားအထည်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် flannelette ဆိုဖာများသည်စျေးကြီးသည်။
၃။ ပိတ်ချောဆိုဖာ - ဆောင်းရာသီတွင်ပူနွေးပြီးနွေရာသီတွင်အေးမြသည်
ဆောင်းရာသီတွင်ပူနွေးပြီးနွေရာသီတွင်အေးမြသည်၊ ပိတ်ချောဆိုဖာ၏ဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးမှာ၎င်း၏အပူစီးကူးမှုကောင်းမွန်သည်။ နွေရာသီမှာပူရင်တောင်ချွေးတွေမပူပါနဲ့။ ပိတ်ချော၏အရည်အသွေးသည်အလွန်နူးညံ့ပြီးပျော့ပျောင်းသည်၊ ပျော့ပျောင်းသည်။ ရိုးရှင်းပြီးသဘာဝကျသောစိတ်ထားရှိသည်။
4. ရောစပ်ဆိုဖာ - သဘာဝနှင့်ဆင်တူသည်
ဓာတုဖိုင်ဘာပစ္စည်းများဖြင့်ရောစပ်ထားသောချည်သည်ပိုး၊ flannelette သို့မဟုတ်လျှော်၏အမြင်အာရုံကိုဖော်ပြနိုင်သည်။ သို့သော်ပုံစံနှင့်အရောင်သည်သဘာဝကျပြီးစင်ကြယ်သည်မဟုတ်သော်လည်းစျေးနှုန်းမှာအတော်အတန်နည်းသည်။
post အချိန်: မတ်လ -15-2021